रामकुमारी झाँक्री पक्राउ परेपछि सरकारको सर्वत्र आलोचना, कसले के भने ? - Everest Dainik - News from Nepal
रामकुमारी झाँक्री पक्राउ परेपछि सरकारको सर्वत्र आलोचना, कसले के भने ?
२०७७, २९ माघ बिहीबार
काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षकी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि सरकारको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।
गलत कानुन प्रयोग गरेर पक्राउ गरिएको भन्दै सरकारको सर्वत्र आलोचना भइरहेको हो । प्रहरीले राज्यविरुद्धको कसुर गरेको आरोप उनलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ । तर, बोलेकै भरमा कुनै नागरिकमाथि राज्यविरूद्धको कसुर लगाउन नमिल्ने कानूनविद्को तर्क छ ।
के छ राज्यविरुद्धको कसुरको दफा ५८ ?
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “संसद्” भन्नाले नेपालको संविधानबमोजिमको सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले व्यवस्थापिका–संसद्लाई समेत जनाउँछ ।
पक्राउ किन ?
गोरखामा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रपतिबारे गरेको टिप्पणीलाई लिएर नेकपा ओली समूहसम्बद्ध अनेम संघले रामकुमारीलाई कारबाही गर्न माग गरेको थियो ।
‘राष्ट्रपतिका कुरा त के गर्नु ? म बडामहारानीलाई गोरखाबाटै सन्देश दिन चाहन्छु । निर्वाचनको तयारीका लागि सुखसुविधा ऐश–आराम छाडेर शितलनिवास छाडेर पहिला कोटेश्वरमा आउनुस्, चाबहिल कि कता बानेश्वरतिर बसाइ छ भन्ने सुन्या छु, होइन भने बालकोटै गए पनि हुन्छ । नेपालको कुन जिल्लाबाट चुनाव लड्ने हो ? त्यसको तयारी गरेर सन्देश पठाउनुस्, तपाईंसँग म पनि भारी हुन्छु’ गत साता गोरखामा आयोजित एक कार्यक्रममा झाँक्रीले भनेकी थिइन् ।
याे पनि पढ्नुस नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पायो दल दर्ताका प्रमाणपत्र
झाँक्रीले काठमाडौंमा बुधबार आयोजना गरिएको विरोध सभामा राष्ट्रपति सम्मनित संस्था भए पनि उक्त पदमा बस्ने व्यक्तिको कार्यशैली ठीक नभएको भन्दै गलत कार्यशैलीको विरोध गरेको बताएकी थिइन् ।
तर, कानुन व्यवसायी टीकाराम भट्टराई यो कुराले राज्यविरूद्धको कसुरको दफा ५८ आकर्षित नहुने दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘राज्यविरूद्धको कसुर यो संविधान मान्दिनँ भन्ने मान्छेलाई लाग्छ । यो संविधानअनुसार बनेका सरकार र राष्ट्रपतिले गरेको कामको आलोचना गर्नेलाई लाग्दैन ।,’
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले बोलेकै भरमा कुनै नागरिकमाथि राज्यविरूद्धको कसुर लगाउने हो भने अहिलेको असंवैधानिक कदमविरूद्ध बोल्नै लाखौं मानिस जेल जाने बताए ।
राज्यविरुद्धको कसुरमा पक्राउ परेकी झाँक्रीको रिहाइको माग राख्दै बानेश्वरको मीनभवन अगाडि विद्यार्थीहरुले प्रदर्शन सुरु गरेका छन् ।
झाँक्रीलाई पक्राउ गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहृले समेत विरोध जनाइरहेको छन् ।
बाबुराम भट्टराई, जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष
ओली सरकारले राष्ट्रपतिवारे विचार अभिब्यक्ति दिएकै आधारमा युवानेतृ रामकुमारी झककक्रीलाई गिरफ्तार गरेछ ! नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिन्छ ! संविधानको पालन र संरक्षण गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले नै उल्लंघन गरेपछि किन नबोल्ने ? यो सरकारको काल आएकै हो ?
रामचन्द्र पौडेल, कांग्रेस उपसभापति
सरकारले रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गरेर आफ्नो अधिनायकवादी चरित्र उदाङ्गो पारेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको छ । त्यसैले रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गरिएको घटनाको म घोर भत्सर्ना गर्दछु विना शर्त रिहा गरियोस् !
कमल थापा, राप्रपा
रामकुमारी झाँक्रीलाई तत्काल रिहाई गरियोस्।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित नगरियोस् ।
जनार्दन शर्मा, नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य
रामकुमारी झाँक्री लाई पक्राउ गर्ने कुरा नागरिक स्वतन्त्रताको हनन् मात्र होइन देशलाई मुडभेटमा लगेर आपनो निहित स्वार्थ पुर्ती गर्ने षड्यन्त्र हो ।
डा. शेखर कोइराला, नेपाली कांग्रेसका नेता
अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम बिरुद्ध बोलेकै भरमा नेकपाकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गरेर सरकारले सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी चरित्र देखाएको छ । यो सरकार जति दिन रहन्छ, देश त्यति नै अनिश्चितताको भुमरीमा फस्ने पक्का छ ।
झाँक्री पक्राउको भर्त्सना गर्दै तत्काल रिहाईको माग गर्दछु ।
रविन्द्र मिश्र, अध्यक्ष विवेकशिल साझा पार्टी
झाँक्रीलाई विना शर्त रिहा गर् !
जब देशको नेतृत्व गर्नेहरूले राजनीतिको समग्र स्तरलाई रसातलमा पुर्याउँछन्, न तिनको शब्दमा शिष्टता हुन्छ, न कर्ममा कानून हुन्छ । ’रसातलको राजनीति’लाई सफा नगरेसम्म घटना बदलिन्छ, प्रवृत्ति बदलिँदैन । झाँक्रीका शब्दभन्दा ओलीका कर्म बढी आपत्तिजनक र दिर्घकालिनरुपमा घातक छन् । उनलाई कानून लाग्छ कि लाग्दैन ?
याे पनि पढ्नुस सवारी ज्यान मुद्धामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष राउत पक्राउ
कर्तव्य निर्वाह गर्न छोडेर, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कार्य गर्ने अनि त्यसमा प्रश्न गर्नेलाई झ्यालखानामा राखेर तर्साउन खोज्ने ? उहिले महाराजा अहिले राष्ट्रपति ! सरकार झ्यालखानाको संख्या थप, किनकि सत्य को पक्षमा बोल्ने मुख तिमिले देखाएको त्रासले बन्द हुँदैन ।
सूर्य राज आचार्य,
राजनीतिक अभिव्यक्तिका आधारमा युवा नेतृ राम कुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गर्ने सरकारको रवैया आपत्तिजनक छ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा व्यक्त अभिव्यक्ति ठिकरबेठिक छुट्याउने जनताले हो, सरकारले हैन । खबारदार, कुनै पनि अवस्थामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रतिको अंकुश अस्वीकार्य ! चेतना भया ।
विष्णु रिजाल, नेकपा नेता
जुन मुद्दा लगाए पनि मञ्जुर छः रामकुमारी झा‘क्री प्रकरणबाट थप प्रस्ट भएको छ– विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुन् सर्वथा अनुपयुक्त र अयोग्य पात्र हुन् । आलोचना गर्नेमाथि मुद्दा लगाउनु तानाशाही र निरंकुशताको पराकाष्टा हो ।
रन्जित तामाङ, अनेरास्ववियू नेता
लोकतन्त्रमा बोलेकै कारण गिरफ्तार गरिने कार्य कदापी स्वीकार्य हुन्न । लोकतन्त्रका लागि लड्यौं, त्यहीँ लोकतन्त्रमा बोलेकै आधारमा पक्राउ हुनुपर्ने ? अब आन्दोलनको आँधिबेहरी ल्याउँछौं । यो तानाशाहीकरण हो ।
ट्याग्स: नेकपा, पक्राउ, रामकुमारी झाँक्री